Maxaa kasoo baxay shirkii Djibouti? - Awdinle Online
Maxaa kasoo baxay shirkii Djibouti?
June 14, 2020 (Awdinle Online) – warar San ka heleyno Djibouti iyo howlwaseeno ku dhow dhow wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ee ka furmay Jabuuti ayaa xaqiijiyay in dhabar jab ku yimid shirka, ka dib markii Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi uu diiday in laga hadlo arrin la xiriirta Midnimada Soomaaliya oo ka mid ahaa ajandayaasha shirka, sidaas darteed uu dalbaday in loo wada hadlo si siman oo heer labo dowladood ah.
Khudbadii uu ka jeediyey furitaanka Muuse Biixi ayaa ku jirtay in aanu marna diyaar u aheyn inay dib ula midoobaan Soomaaliya.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhankiisa sheegay inuu Jabuuti u yimid isla garashada Midnimada Soomaaliya.
Sidoo kale ilo wareedyo ku dhow dhow Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya iyo Safiirka Mareykanka Yamamoto ayaa sheegaya inay ka xumaadeen in Madaxweynaha Somaliland aanu diyaar u aheyn tanaasul.
Waxaa hadda socota diyaarinta war murtiyeed laga soo saaro shirka, kaasoo kagu caddeynayo in ku soo laabashada wada hadalada ay tahay guul weyn, sidoo kalena Guddi Farsamo loo saari doono sii wadida wada hadalada
Previous articlePresident Muse Bihi rejects the Unity and integration of Somalia and Somaliland
Next articleSomaliland oo war cusub kasoo saartay shirka- Jabuuti